Ciidamada dalka Kenya oo Sheegay in ay dileen 5 kamid ah ururka Al-Shabaab | SAHAN ONLINE
Ciidamada dalka Kenya oo Sheegay in ay dileen 5 kamid ah ururka Al-Shabaab
NAIROBI – War qoraal ah oo ay soo saareen Ciidamada dalka Kenya ayey ku sheegeen in deegaanka Linda Boni ay ku weerareen koox ka tirsan Ururka Al-Shabaab,kuwaasoo la tuhmayo iney ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay deegaanka Ijara ee gaarisa.
Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkaas lagu dilay 5 kamid ah ururka Al-Shabaab,halka intii kale oo qaarkood ay dhaawacyo qabeen u baxsadeen deegaanka Sariira oo 26km u jira Waqooyiga Baure ee dalka Kenya.
Ciidamada Kenya ayaa qoraalka kasoo baxay sidoo kale lagu sheegay in askartooda oo ku daba jiray maleeshiyaadka Al-Shabaab ay wadada isku heleen iyagoo isku dayaya in u baxsadaan dhinaca xuduuda Soomaaliya.
Ciidamada Kenya sidoo kale waxa ay sheegeen in maleeshiyaadka Al-Shabaab kasoo furteen 5 qori oo nooca AK 47 ah,rasaas,laba bam oo nooca gacanta laga tuuro ah iyo agabyo kale oo ay wateen.
Dowladda Kenya ayaa dagaal xooggan kula jirta maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ka dagaalama Soomaaliya iyo gudaha dalka Kenya.